Mivoatra hatrany … : handray vahiny maro ny « Slam national » | NewsMada
Mivoatra hatrany … : handray vahiny maro ny « Slam national »
Mbola mitohy ny fifanintsanana isam-paritra (Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga ary Toamasina) eo amin’ny « slam poezia » ho fiatrehana ny famaranana, hotanterahina eto Antananarivo, mandritra ny « Slam National » andiany fahavalo. Hotontosaina ny 2 hatramin’ny 9 desambra izao izany.
Mihamaro hatrany ireo liana amin’ity karazan-javakanto ity. Mitondra fanatsarana sy zava-baovao ho an’ny hetsika « Slam National » ny mpikarakara, Madagaslam, ho fanomezana fahafaham-po azy ireo sy, indrindra, hanehoana ny hakanton’ity taranja, izay azo lazaina ho « vaovao » nefa miavaka ity.
Amin’ity andiany fahavalo ity àry, hampiantrano vahiny maromaro, mpanao « slam poezia », samy efa fanta-daza any amin’ny firenena niaviany avy (Belzika, Alemaina, Gabon, Soisa), ny « Slam National ». Anisan’izany i Narcisse, teratany soisa, izay sady mpiahy ny fifaninanana amin’ity taona ity. Ankoatra ny fizarana traikefa, haneho ny talentany koa izy, ny 6 desambra, ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM).
Tsiahivina fa misy sokajy roa : ny mandeha irery sy ny ekipa ny fifaninanana « slam poezia ». hotontsaina ny 9 desambra tolakandro ny famaranana. Ankoatra ity fifaninanana ity, ho fotoan’ny fety sy ny fifampizarana ny « Slam National ». Hisy ny atrikasa ampianarana ny fomba fanoratana sy fiantsana, fampisehoana samihafa, sehatra malalaka, fanentana sy fampirantiana.